Puntland iyo SRRC oo ka Baaqday Shirkii Saaka
Nairobi, Kenya | 17 Oct, 2002
Iyadoo maalintii 3aad uu guda galay shirka dib u heshiisiinta soomaalida ayaa ergooyinka ka socday maamulka Puntland oo uu hogaaminayo Col. Cabdillaahi Yuusuf Axmed aysan maanta soo xaadirin hoolkii uu shirka dib u heshiisiinta soomaalidu ka socday.
Ergooyinkaas waxay sheegeen inn ay uga maqnaayeen Kordhinta tiradii Ergooyinka Shirka Eldoret iyo ka qaybgalayaasha aan la casuumin , waxayna arintaani ka danbaysay markii shalay ay ku hanjabeen in aysan kasoo qayb galeenin ilaa laga xaliyo tirada sii kordhaysa ee ka qaybgalayaasha.
Wariyaha IQRA Kadija Mayoow iyo Qoraaga lagu magacaabo Maxameed Deeq oo nala soo xiriiray waxay kaloo sheegeen in iyana aan golaha wada hadalka cag soo dhigin Wufuudii ka kala socday SSRC, Waxaa kaloo aan ka soo qayb gelin shirkii saaka hogaamiye kooxeedka Maxamed Dheere, Dhinaca kale Muuse Suudi iyo Shaati Guduud oo ku sugan Eldoret.
Dhanka kale IGAD ayaa khatyaan ka taagan dad iskood isku Casuumay ama ay ugacan haadiyeen kuwo markii hore ismaqiiqay oo casuumad aysan hubsanin ugu yeeray ,kuwaasoo la sheegay inay hoganayaan duleedka goobta shirka uu ka dhacayo waxaana ay ubadantahay in goobohoodii lagu soo celiyo.
Ergayga Kenya u qaabilsan Soomaaliya Mwangale oo saaka ka hadlayay shirka ayaa yiri:
Somaliland waan ku casuunay shirka isla markaana ay sugayaan wali waxaana wanaagsan hadii ay doonayaan in ay go’aan in ay sheegtaan oo ay yimaadaan.